Isikhululo senqwelomoya sase-Eva-Sen's Istanbul | RayHaber
[11 / 12 / 2019] Wamkelekile ngokukodwa kwi-Qatar Airways '1 Millionaire Passenger eSabiha Gökçen	34 Istanbul
[11 / 12 / 2019] ISabiha Gökçen Airport Subway iza kubekwa e-2020	34 Istanbul
[11 / 12 / 2019] IMetro Istanbul ukwenza ukuThenga abaqhubi boLoliwe	34 Istanbul
[11 / 12 / 2019] I-80 yezigidi ze-Euro zisayinwe yi-Üçyol Buca Metro	35 Izmir
[11 / 12 / 2019] Umphathi Jikelele we-TCDD Uygun Uyaya kwi-UIC RAME Meeting	33 France
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara34 IstanbulIngcaciso ye-Eva-Sen esuka kwisikhululo seenqwelomoya i-Istanbul
12 / 11 / 2019 34 Istanbul, JIKELELE, Airports, Highway, ZOMHLATHI, Sithili saseMarmara, ETURKEY
umoya ovela kuwe kwisikhululo seenqwelomoya i-istanbul
Iimeko ezimbi zokusebenza kwabasebenzi be-TGS abasebenza kwisikhululo seenqwelomoya i-Istanbul ziyaqhubeka. Umbutho wabasebenzi bezoMdiza (Hava-sen) uthe kufuneka bacinge ngabasebenzi nangona bengengombutho wabasebenzi ogunyazisiweyo kwaye badwelise amanqaku amaninzi ahambelana nale meko yokusebenza.
Iimeko ezimbi zokusebenza kwabasebenzi baseTurkey Groud Service (TGS) kwisikhululo seenqwelomoya i-Istanbul ziyaqhubeka. Ngenxa yomgama ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kwiindawo ekuhlalwa kuzo, ixesha elichithwe kuthutho kunye nobude beeyure zenkonzo zabenza bangonwabi abasebenzi, kodwa kwabakho ingxelo ephawuleka ngalo mbandela.
Uz Simeme abaphathi babo ukuba bacinge ngamaxabiso abantu kunye nabasemthethweni, Thumela umanyano kwisitatimende.
Inkcazo eyenziwe ngu-Eva-Sen imi ngolu hlobo lulandelayo:
Abasebenzi abathandekayo boMbane beNdiza
Sikwabeke iliso kumiliselo lwe-26.T whichS, oyaziyo kakuhle ngenkqubo yayo yokulungiselela kunye neyokuvunywa, emva kokusayina kwayo, ngaphandle kwako konke ukusilela kunye neempazamo. I-TİS luluhlu olubaluleke kakhulu olukhusela amalungelo kunye nemidla yabasebenzi. Ukufaka isicelo kubaluleke kakhulu. Ayinakulungiswa nge-protocol eyodwa okanye ezizimeleyo. 26. Azange sithathe inxaxheba kwi-TIS emva koko saphanda ngemeko yemicimbi eyayiza kulawulwa yimigaqo-nkqubo. Besifuna ukwabelana ngeziphumo kunye nawe ukuze ufunde iinyani.
1. I-26, ngaphandle kwazo zonke izilumkiso zethu, sisisombululo kwimiceli mngeni yokufudukela kwiNdawo eNtsha. Ayibandakanyekanga nangayiphi na indlela kwi-TIS. Ngoku siyabona ukuba ngelishwa sasichanekile. Kukho ubunzima obukhulu ekusebenzeni ngaphakathi nangaphandle. Iinkonzo aziboneleli lula kubasebenzi kwaye abo basebenze ngeendlela zabo bajongana nobunzima obukhulu. I-9 ithatha ixesha elingaphezulu kwehora. Abasebenzi kufuneka bazinyamekele. Abaqhubi beenkonzo yingxaki eyahlukileyo. Asinakho ukuqikelela ukuba bangaphi abahlobo bakho esiya kuphulukana nabo emsebenzini, bangaphi abahlobo abaza kuba nengozi. Amaxesha e-13-4 andise ukuhamba kwemihla ngemihla kubasebenzi abasebenza phantsi komhlaba kwindawo enkulu yesiphelo. Ukutya kwabasebenzi neengxaki zangasese kunye nokuhamba kwabantu abahamba ngenqwelomoya phakathi kwamagumbi eqela, indawo yesitalato, ukungena kwamasango kunye nokuhamba ngenqwelomoya akuzange kuconjululwe ngokwaneleyo.
2. Omnye wemicimbi othenjisiweyo oya kusonjululwa kwi26.TİS yi95 ebandakanya imigaqo ye-görev yomsebenzi kunye nokuphumla kwamalungu eqela .. Umanyano olunobuchule alunakuqhubeka nangaphaya kwentetho ethi kurhulumente simisele ikhomishini, sisebenza kuyo. Njengama-HAVA-SEN, siyaqhubeka neengqungquthela zethu zenyanga ze-SHT-FTL.Imicimbi ebalulekileyo ekufuneka ilungiselelwe ukusebenza kunye nokuphumla kwamaqela aqinisekileyo. I-95 yokuxhamla umsebenzi ngokuchonga izibonelelo kunye nezinto eziluncedo kwi-SHT-FTL. Umbutho ofanelekileyo awenzi mzamo uyimfuneko wokumisela izibonelelo zenqaku. Elinye lawona malungelo asisiseko, anjenge-N 03 ngexesha lendawo: 00 kunye nokuvalwa komsebenzi kwangosuku olufanayo "," ayinakukhutshwa kwiintsuku zasekhaya "kwaye kwakhona, ayinakho ukuqalwa ngokukhawuleza emva kokuphela kweentsuku ezilandelelanayo zasimahla (00: 00 local) önemli kumalungelo ethu 26. Ixesha leTis'de alibandakanywanga. Ukuphulukana kwamalungelo afunyenweyo kuchasene ngokupheleleyo nomoya wobumbano. Umanyano akufuneki ulahlekelwe, kufanele uphumelele. Simema ukubuyiselwa kwamalungelo athatyathwe kumaqela eenqwelomoya ngendlela eya kuthi ikhutshwe ngaphandle kokulibazisa.
3. Rhoqo ngenyanga, abasebenzi beekhabin ze-500-700 bathathwe kwinqwelomoya phantsi kwegama loqeqesho lobungcali kwaye inkampani ihlawula inkampani ngembuyekezo yenqwelomoya abangayinikwanga. Kodwa kwangaxeshanye, i-700 ibhengezwe ukuqeshwa kweekhabhathi. Le meko, ebonakala ngathi iyaphikisana, ibonisa ukuba injongo kukususa abasebenzi abanamava ngokukhawuleza, ukuthatha isikhundla sabasebenzi be-A0, ukunciphisa iindleko zemivuzo. Kuba inkampani ayinayo inkqubo-esekwe kwinkqubo yesabelo, abaqondi ukuba ukuhamba ngenqwelomoya kubhalwe egazini. Abayazi intsingiselo yokuphakama kunye namava. Umanyano lubambe isitya. Ngapha koko, uluhlu lwee-signin zekhabhin ezilungiselelwe yimizamo ayizizo izizathu ezivakalayo, kodwa ivumba lokuthandeka kunye nedodge.
4. Inkampani iyinqamle ukuthenga. Ngokuqinisekileyo, akukho sizathu sokuba i-24 MAX ibhabhe, kodwa kuthathwa ukuba i-2020 iya kubhabha ivela kwiinyanga zokuqala. Uqeqesho luthatha ixesha. Kodwa njengoko besibonile ngaphambili, iindiza ziza kuqala emva koko amaqela asetwa. Xa akwanelanga, kuthathwa umqhubi wenqwelo moya yangaphandle. Iinkampani ezifana noThomas Cook, Jet Airways, eGermanania, zatshona kwindiza yehlabathi. IRyan Air iyangcangcazela. Ke kukho isixa esikhulu soncedo lomqhubi welizwe langaphandle kwimarike. Kulula ukuvala isikhewu. Kodwa ukunika ithuba iitshayeli zaseTurkey ithuba elincinci kuya kuba sisisombululo sexesha elide. Ubuncinci abaqhubi beenqwelomoya ababefikelele kwinqanaba lokuphumelela kunye nekhontrakthi bebefanele banikwe ithuba.
Omnye umba kukuba kubuhlungu ukuba iintlawulo zabo baphumeleleyo kwiZiko leMfundo aziziswa kwi-ajenda nangona izithembiso kunye nemisebenzi ininzi. Ukuxhaphaza kuyaqhubeka kwaye akukho sandi sisuka kwimanyano yabasebenzi efanelekileyo.
5. Njengoko kuya kukhunjulwa kwisipapasho seendaba esenze kwi-29 Meyi 2019, iindleko zokuhamba, ubunzima besikwere esitsha, ukuncipha kwabagibeli kunye nobunzima bezemali ngenxa yokuphuhliswa kwesihlanganisi, njengangaphambili, siya kuphosa uzinzo lwe1500 okanye sithathe amanyathelo afanelekileyo okunciphisa ukunyuswa kwemivuzo. Kule nto, umbutho ogunyazisiweyo uye wehlisa abakhweli, esithi abasebenzi bavumelana kuyo ngenxa yokuvota kwezimvo zoluntu. Ngoku siza kwinqanaba elinye. Ummeli wombutho wathi basebenza kulo mcimbi. Asikaze sibandakanyeke emalini. Sasicinga ukuba ixabiso elongeziweyo elenziweyo liya kuvuzwa. Nangona kunjalo, imanyano yabasebenzi yaziwa ngokuba 'sisonka', silumkisa umqeshi ukuba angahambi ngendlela efanayo ukuze abonakale emhle kwakhona. Imvakalelo yobuthathaka esele ikho yobuthathaka sele ithembekile. Ukubuya kwinkampani yethu kuya kuba yinzuzo kwaye kungabi nelahleko. Indlela yokunciphisa iindleko ayisiyi kujongwa kwimivuzo yabasebenzi. Umanyano lukhona ukuthintela ezi mpazamo, bangabi sisixhobo sokonakalisa abasebenzi.
6. Abahlobo be-TGS bathi baphantsi koxinzelelo olukhulu kunye nokukhathala. Asibuzi ubume be-TGS, ulawulo kunye nemigaqo-nkqubo yezoqoqosho. Nangona kunjalo, umsebenzi wabo ubaluleke kakhulu kwaye uxabisekile KUTH. Nangona kunjalo, ngaphezulu kwekhulu labasebenzi babekwa inyanga nenyanga kwaye abanye banyanzelwa ukuba baphathwe zonke iintlobo zokuphathwa kakubi ngenxa yesonka. Izibonelelo zemithetho ngelishwa ziyaxhonywa, funa ilungelo lokuya nakubani na ofuna, kodwa ibizwa ngokuba '' ngaphandle komnyango ''. Umgangatho wenkonzo ebonelelwe phantsi kwale meko kufuneka ubuzwe. Kithina, ukhuseleko kunye nokukhuseleka kwendiza kuqinisekiswa ngegalelo ngqo lomntu ngamnye. Enye yezinto ekubekwa kuyo ithiyori 'yeSwitzerland Chese' yi-TGS. Simema abaphathi babo ukuba baqwalasele amaxabiso omntu nawomthetho.
Basebenzi abathandekayo, nangona ingeyiyo inyunyana egunyazisiweyo, siyaqhubeka nokukunceda ngobukho bethu. Kuluxanduva lwethu ukuzisa iinyaniso phambi kwakho. Siza kuqhubeka ukwenza konke okusemandleni ukukhusela ilungelo lakho kunye nomthetho wakho. Uphuhliso lwe-cyclical kwixa elizayo luya kwandisa ukubaluleka kwethu kunye nexabiso lethu. Ke silindele ukuba ubekhona kwimanyano ekufaneleyo.
Ukuhamba ngesithuthi ukusuka eMemur-Sen kwisikhululo senqwelomoya iAntalya…
I-Airport yase-Istanbul iya kwandisa isabelo sethu semarike kwimpahla yomoya
USihlalo we-UDEM HAK-SEN u-Peker uvakashela i-TUDEMSAS
I-TCDD yezoThutho Inc. Ngokubanzi ukusuka kwi-Mem
Ukuthunyelwa kwe-102 TL esuka kwi-Haksen ukuya eMemur-Sen
Inhlanhla evela ku-Çetin Altun kwiGosa lezothutho-Sen
UYesu, Umphathi Jikelele we-TCDD kwiGosa lezoThutho-uSen…
I-DEGÜVDER Ukutyelela iTurkey iTransport-Sen
IGosa-Ukutyelela kwe-Sen kuMphathiswa u-Arslan
Umncedisi Jikelele we-TCDD kwiGosa lezoThutho-uSen…
Ukusuka kwiGosa lezoThutho-uSen ukuya kuMphathi Jikelele we-TCDD Uygun '
Ukuhamba ukusuka kwi-TCDD Taşımacılık A.Ş. Jikelele ...
Ukwakhiwa kweCengiz ukuya kwiTonela 98 yezigidi zeerandi eSlovenia
I-Istanbul Sabiha Gokcen kwathiwaywa kweyona nqwelomoya kwisikhululo senqwelomoya